October 2017 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Maqaa Abbaa,Ilmaa ,Afuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen! Waqtii (Yeroo)Abaaboo(Tsigee)
Maqaa Abbaa,Ilmaa ,Afuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen!
Akka mana Kiristaanaa OrtodoksiiTawaahidoo biyya keenyaatti waqtiin abaaboo fulbaana 26-sadaasa 6tti ni kabajama.waqtii kanatti abbootiin seenaa godaansa Giiftii keenya dubroo Maariyaam;ilma ishee wajjiin Heroods jalaa goodaanan iccitiidhaan,yeedaloon, weedduun yeroo itti yaadatanidha.yeroo kanatti Abbootiin Mana Kiristaanaa keenyaa yaadaan Giiftii keenya waliin gara gammoojjii Gibtsiitti(misiriitti) bu’u, bakkaa bakkattis ni socho’u.
Seenaan godaansa Giiftii keenya Dubroo Maariyaamii fi Gooftaa keenyaa Wangeela Maatewoos boqonnaa lamarratti barreeffameera.Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos gaafa Beeteliheem Dallaa horii keessatti dhalate; Ergamoonni bu’anii galateeffatan,loon aarsaa afuura isaanii dhiheessaniif,ogeessonni biyya baha fagoo warqee ,ixaanaa fi Qumbii fidanii dhufuun; Mootiin samii fi lafaa eessatti; gara kamitti dhalate?deemnee aarsaa dhiheeessinaaf jechaa yeroo dhufan; Heroods dhagahee nahe.Heroods aangoo mootummaa isaa; akka agartuu ija isaatti eeggata.Kanaaf mootiin samiif lafaa
dhalateera jechuu gaafa dhagahu ajjeesuuf jecha barbaacha jalqabe.Yeroo kanatti Ergamaan waaqayyoo; eegaa Maariyaam kan ta’e qulqulluu Yoseefiin Heroods mucaa kana ajjeesuuf barbaadaa jira waan ta’eef; haadhaa fi mucaa fudhuutii gara Gibtsiitti baqadhu; deebi’aa jedhee hangan sitti himutti achuma turaa jedheen.Yoseefis Giiftii keenya Dubroo Maariyaam ilma ishee waliin; Seloomee dabalatee; ni oolla ni bulla osoo hin jedhin godaansa gara Gibtsiitti jalqaban.kana irraa ajajamuu guddaa baranna.ergamaan ka’aa deemaa jennaan tole jedhanii,har’uma ka’aa jennaan; galaa hin qopheeffanne jedhanii sababa hin dhiheessine;hangan isinitti himutti achuma turaa jennaanis tole jedhan.ajajamuun akkanaa ajajamuu dinqisiisaa mitiiree?. godaansi Dubroo Maariyaam ilma ishee wajjiin Yooseefi fi Selomeen gara Gibtsiitti jalqabame kun karaa dugda lukkuurra/gabaabaa fi salphaa hin turre.Gaafa godaansa jalqaban galaa qopheeffatanii manaa hin bane. Karaa irratti beelaan qoramani,bishaan dhugan fudhatanii manaa hin bane; dheebuudhaan gidirfaman,uffata qorraa fudhatanii hin baane ilmi ishee uffata ifaa ergamoota isaatti uffisu qorraan gidiraa argan;Gammoojjii Gibtsii keessa miillaan ciirracha akka ibiddaa miila namaa nyaaturra; samiirraa akka abiddaa aduu isaan gubu danda’aa,sodaa saamtotaan gammoojjiidhaa gara gammoojjii biraatti gidira guddaa argaa godaanan.Godaansa isaanii keessattis takkaa gara xibiriyaados,takkaa gara gaara Libaanositti,takkaa gara debre Toonaatti,takkaa gara Beeteliheemitti,takkaa gara lafa Gaazaatti,takkaa gara lafa Gaaditti,takkaa immoo gara Itiyoophiyaatti fi kkf tti godaanuun gidiraa guddaa arganiiru. .Baqni isaanii akka godaansa yeroo har’aa daandii konkolaataarra konkolaataadhaan,galaana irra Dooniidhaan,qilleensa irra xiyyaaraan hin turre.miila qullaa karaa irratti; loltoonni Heroods na argu jettee sodaachuun basonaa bosonatti,ciirrachaa gara ciirrachaatti lafa gogaa bakka bishaan hin jirre keessa malee.
Gooftaan maaliif godaane?
Godaansa Giiftii keenyaa fi ilma ishee yommuu kaasnu yeroo baay’ee maaliif godaanan gaaffiin jedhu keessa keenyatti ni uumama.yoomiyyuu namni sababa malee hin godaanu waan ta’eef gaaffiin sammuu keenyaa dhuguma.namni kan nyaatu,kan dhuguu fi kan uffatu yoo dhabu ni godaana.Diinni hamaan yoo isa qunnamu; diina isaa jalaa ni godaana;yakka guddaa yoo hojjete adabbii jalaa miliquuf ni godaana;sababa siyaasaan ni godaana.Gooftaan keenya garuu diinummaadhaan kan irratti ka’e Heroods loltoota isaa faana sekondii keessatti fixuu danda’a ture.Foon uffachuun daa’ima waggaa lamaa ta’ullee baroota dura Waaqa ture waan ta’eef; Heroods irratti humna waaqummaa isaa muul’isuu dhiisee godaanuun; godaansi Gooftaa godaansa namootaa irraa adda waan ta’eef; gaaffii kaasa?.Haa ta’uutii; godaansi Gooftaa iccitii bal’aa qaba.Gooftaan kan godaane; sababa sadiifidha. Sadanuu akka armaan gadiitti kan jiru kana ta’a.
1ffaa Godaansa hordoftoota isaa barsiisuuf godaane
Mana hoo’aa dhiisanii; aduufi qorri gara bakka wal jijjiirutti gara gammoojjitti godaanuun; ibiddaan gubachuu fi Seefiidhaan qalamuu gadi kan hin taane; hojii aarsaa ta’uu dha.Hojiin aarsaa Iyyesuus kiristoos hin jalqabne hin jiru.godaansas daa’ima waggaa lamaa ta’ee jalqabe.Sababa amantaa isaaniin reebamuufi hidhamuun akkuma jiru; biyya isaanii ,qabeenya isaanii,dhiisanii hanga godaanuutti; kan ga’an ni jiru.namoonni godaansarra jiran; godaansa Gooftaa fi dubroo Maariyaam yaadachaa ni jajjabaatu.Iyyesus Kiristoos dursaa kiristaanotaa waan ta’eef Heerodsiin waraanuun; waraana barsiisuu hin barbaadne.Waraanni hojii kiristaanotaa akka hin taane barsiisuuf jecha godaane. “Magaalaa tokko keessatti gidiraa yoo isinitti baay’isan gara magaala biraatti godaanaa”akkuma jedhe,Mate 10:23
2ffaa Nama ta’uu isaa ibsuuf jecha godaane.
Iyyesuus kiristoos biyya isaa osoo hin gadhiisin; ija Heeroodsi jalaa dhokachuu ni danda’a ture(Yoh 7÷10);garuu ogummaa Waaqummaa isaan Heroods jalaa dhokateera osoo ta’ee; foon uffachuun isaa, nama ta’uun isaa ifa hin ba’u ture.Ija Heerodsiin kan hin argamne yoo ta’e; foon osoo hin uffatin kan uffate fakkaatee kan muul’ate; foonii fi lafee kan hin qabne ekeraadha jedhu ture.Foon Addaam irraa tokko kan hin hir’anne; Addaam lammaffaa isa guutuu ta’uu isaa; foon inni uffate kan dhiigu kan madaa’u,Seeyifiinis ta’ee; eeboodhaan yoo waraaname miidhaan kan irra ga’u; foon ilma namaa kan uffate ta’uu isaa ibsuuf godaanaa ta’e.Namni foon uffate hunduu diina isaa jalaa miliquu kan danda’u godaanuun waan ta’eef; Gooftaanis diina isaa Heroods jalaa miliquuf gara Gibtsiitti godaane.
3ffaa Diyaabiloosiin ari’uuf godaane
Addaam muka Balasii nyaatee; uumaa isaa wajjiin walloluun Gannata keessaa erga ba’ee booda; walitti dhufeenyi waaqayyoo fi namaa; walirraa fagaachaa deeme.Kanas kan fide Diyaabiloos.
Waaqayyo Ilmi foon namaa yeroo uffatetti walitti dhufeenyi namaa fi waaqayyoo deebi’ee hundaa’e;manni diigamee ture deebi’ee ijaarame.Iyyesuus Kiristoos biyya isaa dhiisee ba’uun; Diyaabiloos sammuu namaa abboomee; Too’annaa jala oolche.Gooftaan Heroods jalaa fagaachaa yommuu deemetti Diyaabiloos sammuu namaa irraa fagaachaa deeme;godaansi Gooftaa karaa biraan godaansa Diyaabiloos ta’e.gidiraan Gooftaan fudhatu hunduu; Diyaabiloosiin fagootti meeshaa rukutu ta’e.dhumarrattis fannoorratti duuni Gooftaa du’a Diyaabiloos ta’e.
Gooftaan maaliif gara Gibtsiitti godaane?
Ergamichi yoseefiin mucaafi haadha qabadhuu gara Gibtsiitti godaani jedheera.Yoseef gara biyya barbaadetti akka hin godaanne; ergamichi Gibtsitti jechuun akeekkachiiseera.Gibtsi biyya biroo irraa adda taatee; uumaan ishee dugda haadhaa isaa irra taa’een hubatamteetti.
Gooftaan Gibtsitti akka godaanuuf sababa kan ta’an keessaa :
1.raajin raajotaa akka raawwatamuuf
Raajonni waa’ee godaansa isaa gara Gibtsiittii dubbataniiru.
“Mucaa koo Gibtsi irraan waame”Hosee 11:1
“Waaqayyo duumessa ariifataan balali’aa; gara Gibtsiitti ni dhufa. waaqa(Wantoota) tolfamaa Gibtsiis fuuldura isaatti ni kufu”Isa 19:1.Raajichi Waaqayyo duumessa ariifataan balali’aa ni dhufa jechuun isaa duumessa arifataa kan jedhamte Dubroo Maariyaam yommuu taatu; Gooftaan dugda isheerra taa’ee gara Gibtsiitti dhufuu agarsiisa.
2. Abbootii fakkaachuuf
Abbootiin darban akka Abrihaam,yisihaaq faa yeroo adda addaatti gara Gibtsiitti godaananiiru. Waaqayyo Gooftaan immoo Abrihaam dura kan ture ta’ullee Abbootii fakkaachuuf Gibtsitti godaaneera.
3.waaqolii tolfamoo Gibtsi keessa jiran balleessuuf
Gibtsi biyya waaqoliin tolfamoo itti baay’atan turte.Gooftaan dugda Haadha isaarra taa’ee gara Gibtsiitti yommuu dhufu; waaqoliin tolfamoo Gibtsii kukkufanii caccabaniiru.Afuuronni waaqa tolfamoo irra bulaa turan; Gooftaa gaafa argan sodaatanii waaqolii tolfamoo gadhiisanii deemaniiru.waaqoliin tolfamoo afuurota warra xuraa’oof bultoo ta’anis homtuu osoo isaan hin tuqin caccabaniiru.
Egaa walumaa galatti godaansi; Giiftii keenya dubroo Maariyaam ilma ishee wajjiin godaante; sababoota warreen kanaan oliifidha.Baatii kana keessa abbootiin mana kiristaanaa keenyaa Waa’ee godaansa kanaa kaasuun Maahileetii ni dhaabbatu.Eebba isaa irraas ni hirmaatu. Nutis eebbi abbootii galata isheef dhaabbatanii eebba ergatan hunda keenya irra haa bubbulu.Ameen!
Madda🙁Godaansa Giiftii keenyaa Gibtsii hanga Itiyoophiyaatti; Maggabee Haddis Sibbuuh Daamxeetiin qophaa’e; maxxansa lammaffaa Afaan Amaariffaatiin.)
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-10-31 07:36:502018-10-26 09:20:57Maqaa Abbaa,Ilmaa ,Afuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen! Waqtii (Yeroo)Abaaboo(Tsigee)
QABSUURA WAREEGAMTUU QULQULLEETTII ARSEEMAA
Jalqaba isaa eenyumtuu beekuu kan hin dandeenyee fi onnee namoota foon uffatanii jalaa iccitiin isaa baay’ee fagaataa kan ta’e; asii hamma achii, as keessa jira as immoo hin jiru jechuun kan hin danda’amne, garuu jalqaba kan jiruufi jiraachuu waan hundumaa inni kan beeku samiifi lafa, kan muula’atuufi kan hin muul’anne hundumaa kan uume maqaa Waaqa Abbaa, Addunyaan utuu hin uumaminii fi hin hojjetamin iccitiidhaan Abbaa isaa wajjiin tokko kan ta’e waan hundumaan Abbaa wajjiin kan wal qixxaate maqaa Waaqa Ilmaa Gadaamessa garbawwanii keessaa burqaawwan bishaanii utuu hin dhangala’in, galma isaa guddaa keessaas ifni utuu hin ba’in, Abbaa irraa kan ba’e maqaa Waaqa Afuura Qulqulluutiin dursina.
Kadhannaan isheetii fi Eebbi ishee nu hunda keenya irra bara baraan haa jiraatu.
Fulbaana, 29 haati keenya Wareegamtuu Qulqulleettii Arseemaan, itti gaafatamtuu kawaala isaanii kan taate wareegamtuu Agaataa wajjiin wareegamummaan boqatan. Wareegamtuu Qulqulleettii Arseemaan B.A. 290 Biyya Armaaniyaatti kiristaana umrii dardarummaatti wareegamteedha.
Dhaloonni Ishee Room yoo ta’u wareegamummaa kan fudhatte immoo biyya Armaaniyaatti. Manneen Kiristaanaa Ortodooksii Isaan Bahaa (Oriental and Eastern) Fulbaana, 29 ykn October 9 guyyaa wareegamummaa itti fudhatte kabajuuf.
Seenaa Ishee Kitaaba Sinkisaara Fulbaana, 29 irratti akkuma barreffametti mootii bara sanaa kan ture gantuu Diyooqilixiyaanos; durba bifti ishee baay’ee miidhagduu taate fuudhuu waan barbaadeef biyyoota bulchiinsa isaa jala jiran hundumaa keessa barbaadanii akka fidaniif hojjettoota isaa ajaje. Miidhaginaafi naatoodhaan dorgomtuun kan hin argamneef Qulqulleettii Arseemaa Kawaala dubartootaa Room keessatti argatanii fakkii ishee kaasuudhaan fidaniif. Otuu loon hin galin hattuun mooraa guutte akkuma jedhan, Mootichis fakkii ishee qofa ilaalee baay’ee waan gammadeef hatattamaan cidhi akka raawwatamuuf gara warra abbootii aangoo gurguddaatti xalayaa waamichaa erge.
Dubartoonni Qulqulloonni kunis kana yommuu dhagahan akka isaan oolchuuf, durbummaa isaanitiinis akka isaan eeguuf boo’anii gara Waaqayyootti kadhannaa taasisan. Kana boodas dhokatanii kawaala sanaa baqatanii gara kutaa bulchiinsa mootii Dirxaadis; Isa Armaaniyaa, iddoo ija namaarraa fagaachuun gammoojjii keessa qubatan. Isaan wajjiin kan baqatan dhiirota torbaatamii shanii (75)fi dubartoota soddomii sagali(39)turan. Waan nyaatan waan hin arganneef rakkoo guddaa keessa turan. Haa ta’u malee,Waaqayyo ijoollee isaa hin dagatuutii, Isaan keessaa meshaa ifaa hojjechuu kan beektu isheen tokko waan jirtuuf qarshii meeshaa ifaa sanarraa argamuun xixinneessanii sooratu ture.
Mootichi Diyooqilixiyaanos Qulqulleettii Arseemaa barbaadee argachuu baatus biyya Armaaniyaa akka jirtu waa’ee ishee dhagahe. Namoonni biyyichaatis Diyooqilixiyaanos jalaa baddee kan dhufte waa’ee Qulqulleettii Arseemaa mooticha Armaaniyaa Dirxaadisitti himan. Innis bulchiinsa isaa keessatti muudamaasaa kan ta’e tokkotti anaaf eegiitii naaf ergi jedhee ajajeen. Achittis kana yemmuu dhagahan achiis baqatanii deeman. Namoonni isaan arganis mootichaaf isaan saaxileessanii jennaan, mootichis kabajaan akka fidaniif tajaajiltoota isaa ajajeen. Isheen garuu dhaquu dinnaan lafarra harkisanii mooticha bira ishee geessan. Mootichis miidhaginaafi naatoo ishee ilaalee fedha fooniitiif waan hawweef qulqullummaa ishee xureessuu barbaadee, Itti waamamtuu ishee Agaataan akka isaaf sossobdee tole jechisiistu ishee ajaje.Qulqulleettii Agaataanis gara Qulqulleettii Arseemaa deemtee laphee ishee jabeessiteen, akkanas jetteen, “beekkadhu! xuraa’aan amantaa hin qabne kun akka sin xureessinee fi misirrummaa samiikee akka hin dhabne, kunis galannii fi ulfinni isaaf haa ta’uutii jiraataa Ilma Waaqayyoo Kiristoosidha.” jetteen. Qulqulleettii Arseemaan tole jechuu dinnaan mootichis humnaan qabee gara gola isaatti fudhachuuf durboota kanneen keessaa Qulqulleettii Arseemaa qabe, yeroo sanattis Qulqulleettii Arseemaa irra humni Waaqayyoo waan buleef mooticha lafa irratti isa diriirsite. Mootichis dirree waraanaa keessatti goota cimaa waan tureef durba daa’ima tanaan waan moo’ameef baay’ee qaana’ee, leeyya’ee morma ishee seefidhaan akka irraa kutan ajajee fi Itti waamamtuu ishee Agaataa , durbootaa fi qeerrota hundumaas akka ajjeesan ajaje.
Isaanis ajjeesuuf yommuu fuudhanii deemaa jiran, durboota qulqulloota kana keessaa isheen tokko dhukkubsattee ciisaa turte, isheenis iyyuudhaan warroota ajjeesuuf deeman sana waamtee anas akka obboleewwan kootii morma koo narraa kutaa jettee kadhatte, isaanis garaa laafina tokko malee morma ishee irraa kutanii hundumtuu tokkummaan gonfoo kabaja wareegamummaa fudhatan. Qeerrota Roomii isaan wajjiin dhufan sanas hundumaa ajjeesanii reeffa isaanitis gaara gubbaatti gatan. Wareegamtoonni kun erga wareegamanii booda mooticha irratti Afuuronni hamoon walga’an. Bifti namummaa isaatis badee akka karkarroo/booyyee ta’e.
Qulqulluun Gorgooriyoos gara isaa dhufee isaaf kadhatee fayyinaan, galanni isaaf haa ta’uutii Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoositti ni amane. Sana boodas qaama kabajamaa wareegamtootaa bakka gatamanii walitti sassaabee iddoo kabajamaa kaa’uudhaan Mana Kiristaanaa bareedaas isaaniif ijaarsiseef. Isaan irraas dinqiiwwan gurguddaan ni rawwataman.
Bara ammaa kana keessa Wareegamtuu Qulqulleettii Arseemaan Ijoollee Ortodooksi Tewaahidoo biratti caalaatti beekkamaa fi kabajamaa dhufteetti. Ijoolleen Tewaahidoo waa’ee wareegamtuu durbee tanaa kaasanii kabajuun isaanii kan isaan galateeffachiisudha. Haa ta’u malee waa’ee Kiristoosiif jettee wareegamummaan isheen kaffalte, qulqullummaa foon ishee kabachiisuuf gidiraa isheen argite, shamarrummaan otuu ishee hin gowwoomsin gatiin isheen amantaaf kaffalte, fooniin biyya lafaarra otuu jirtuu kan hojjette caalaa, firii wareegamummaan buuste yaadachuun isheerraa barachuun, bara keessa jiran moo’achuu irra, yaadannoo wareegamtuu kanaa gaa’ela addunyaa kanaa, jaalala foonii isaa yeroof qofa ta’eefi shakkii seenaa ishee wajjiin deemuu hin dandeenye wajjiin wal qabsiisuun gaarii hin ta’u.
Dabalataaniis yeroo ammaa Fakkii wareegamtuu Qulqulleettii Arseemati jedhamee bal’inaan kan beekkamu akkaataa seera fakkii Qulqulloota Amantaa Ortodooksi Tewaahidootiin fakkii Qulqulleettii Baarbaaraati. Armaniyaatti, awwaala ishee irratti kan argamu isa gaditti agarsiifame kana. Mana Kiristaanaa ishee Odola/lafa cittuu Xaanaa keessatti argamtu keessattis fakkii ishee haala duudhaa Fakkiiwwan Itiyoophiyaatiin qophaa’e (Ethiopic Iconography) argachuun ni danda’ama.
Fakkii Qulqulleettii Baarbaaraa Fakki Qulqulleetti Arseemaa Mana Kiristaana
Ortodoksii Armaaniyaati argamu.
Fakkii Awaala ishee irratti fakkii argamu
Walumaa galatti seenaan Wareegamtuu Qulqulleettii Arseemaa, kiristaanota addunyaa hunda biratti kan beekkame, kabajaafi qulqullummaa wajjiin baay’isee kan wal qabate, wareegamtoota dardarraniif fakkeenya guddaa kan ta’u, qulqullummaa ofii eeggachuun qorumsa guddaa kan ta’e bara kana keessatti fakkeenya kan ta’uufi duris obboleewwan shamarranii fi haawwoliin keenya waa’ee Kiristoosiif jecha gatii isaan kaffalan kan agarsiisu ta’uu isaatin guyyaa ayyaanaa ishees afuura kanaan kabajuun barbaachisaadha.
SINKISAARA FULBAANA 29
Mil’uu D/n Daani’eel Kibret
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-10-07 07:03:282018-10-26 09:20:58QABSUURA WAREEGAMTUU QULQULLEETTII ARSEEMAA